बेपत्ता भएका डाक्टर काभ्रेमा भेटिए Global TV Nepal
बेपत्ता भएका डाक्टर काभ्रेमा भेटिए
ग्लोवल टि.भी. मङ्लबार, कार्तिक २५, २०७७ 0
काठमाडौं । सुसाइड नोट लेखेर भक्तपुरबाट बेपत्ता भएका डाक्टर काभ्रेमा भेटिएका छन् । राधेराधेबाट हराएका दन्तरोग विशेषज्ञ डा. दिगम्बर झा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका – १० स्थित अरनिको राजमार्गमा भेटिएका हुन् ।
आफन्तले टिपाएको बा १६ च ८६७९ नम्बरको कारलाई देखेपछि स्थानीय प्रहरीले उनलाई भेटेको महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरका डीएसपीले बताए ।
‘झोकराएर बसेको अवस्थामा फेला पारिएको भन्ने खबर आएको छ’, गिरीले थपे, ‘थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
डा. झाको राधेराधेमा द डेन्टल सिटी नामक क्लिनिक थियो ।
फेसबुकमा सुसाइड नोट राखेर उनी मंगलबार बिहान करिब ५ बजेबाट बेपत्ता भएका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले प्राविधिक अनुसन्धान गरेर उनको खोजी थालेको थियो । उनको मोबाइल काभ्रे क्षेत्रमा सक्रिय देखिएपछि खोजीलाई त्यसतर्फ केन्द्रीत गरिएको थियो । उनको परिवारमा राम्रो सम्बन्ध नभएको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
देशभर मौसम बदली, आज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
जनकपुर–जयनगर रेलको आज परीक्षण गरिने
प्रचण्डकै कारण सुकुम्बासी आयोग खारेज भएको हो : महेश बस्नेत
पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा थपिए ५६ हजार बढि कोरोना संक्रमित
आइपीएलमा पञ्जाबको रोमान्चक जित
सुनको मूल्य प्रतितोला २ सयले गिरावट